Manimba ny asanao ny valinteninao amin'ny valin'ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Asabotsy, Aprily 20, 2013 Alahady 21 aprily 2013 Robby Slaughter
Mpampiasa copyright Flickr Craig Sunter
Tsy nisy ny tsy fahampian'ny hetsika media sosialy nandritra ireo tranga mampalahelo tato ho ato tao Boston. Ny ony Facebook sy Twitter anao dia be loatra noho ny atiny nanondro ireo fisehoan-javatra niseho isa-minitra. Raha ny marina, ny ankamaroany dia tsy misy dikany ivelan'ny teny manodidina.
Tsy misy ihany koa ny tsy fahampian'ny mpitantana mari-barotra amin'ny haino aman-jery sosialy izay nanararaotra ny fomba fanao tsara indrindra nandritra ny krizy. Stacy Wescoe nanoratra hoe: “Tsy maintsy nijanona aho ary niteny hoe: 'Tsia, tsy mila mahita an'izany ny olona izao,' ary avelako banga ny pejiko Facebook mandritra ny andro.” Nampitandrina i John Loomer fa "Ny fandefasan-kafatra amin'ny marika matetika dia mety hanjary tsy mahatoky fo mandritra ireo fotoana ireo." Pauline Magnusson dia milaza, “Amin'ny fotoana mampalahelo dia tsy izany no ilain'ny mpihaino antsika.”
Ary mitohy hatrany.
Ny ankamaroan'ny olona dia manome torohevitra mitovy, ary raha ny marina dia manome sosokevitra mitovy amin'ny laharana voalohany ny lisitr'izy ireo. Steven Shattuck miantso azy io hoe "Atsaharo avy hatrany ireo bitsika, hafatra ary mailaka voaomana."
Fa maninona Satria amin'ny maha BlogHer's azy Elisa Camahort no manoratra:
Izahay dia tsy te ho ilay fikambanana blithely miresaka momba ny asa-tanan'ny ankizy, raha miandry kosa ny vondrom-piarahamoninay hahafantatra hoe firy ny ankizy naratra na very tamina fitifirana tany am-pianarana. Izahay dia tsy te ho lasa fikambanana izay mampiroborobo fatratra ny fitaovam-panatanjahan-tena raha miandry ny handrenesana ny sakaizany sy ny havany eo amin'ny marathon ny vondrom-piarahamoninay.
© Mpampiasa Flickr Craig Sunter
Rehefa nanandrana nahatakatra ireo fanehoan-kevitra ireo aho dia nahita ny hevitr'i Mary Beth Quirk tao Ilay mpanjifa. Manao izy ity teboka manaraka ity:
Tsy mifangaro fotsiny ny orinasa sy ny trangan-javatra mahatsiravina ary mahasosotra izay mamoy ny ain'ny olombelona.
Voakasiky ny krizy lehibe isika rehetra. Mihetsi-po daholo isika. Ny habetsaky ny asa aman-draharaha isan'andro dia toa tsy dia manandanja loatra rehefa miatrika zavatra mahatsiravina toy ny asa fampihorohoroana, loza voajanahary, na lozam-pifamoivoizana isika.
Azoko tsara ny faniriana hijanona tsy hiasa. Rehefa novonoina (tamin'ny zoma) ny filoha Kennedy, ny Tribune any Chicago tatitra fa ny alatsinainy teo dia saika nikatona daholo ny birao sy ny ankamaroan'ny orinasa, ary ny ankamaroan'ny sekoly sy ny oniversite dia nampiato ny fianarany.
Saingy amin'ny tranga fanapoahana baomba sy fikarohana ireo ahiahiana dia tsy hitako misy firaketana an-tsoratra na iza na iza mijanona na mampiadana ny asan'ny orinasa any ivelan'i Boston (afa-tsy ny fepetra fiarovana). Nanohy ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny tsirairay, ny fampandehanana ny famokarana, ny fiantsoana ny varotra, ny fanaovana fanadihadiana ara-bola, ny fanoratana ny tatitra, ny fanompoana ny mpanjifa ary ny fandefasana vokatra.
Ny lafiny rehetra amin'ny orinasa dia mihazakazaka afa-tsy iray. Tokony hampijanona ny fampielezan-kevitray izahay - indrindra ny anay haino aman-jery sosialy fampielezan-kevitra amin'ny marketing - mandritra ny krizy
Fa maninona no tsy mitovy ny marketing raha oharina amin'ny asan'ny orinasa hafa? Raha "tsy mifangaro ny hetsika fandraharahana sy mahasosotra" dia maninona isika no tsy miadana ny zava-drehetra midina? Fa maninona ireo mpitantana marika be dia be no mihevitra fa tokony hijanona tsy hiasa intsony izy ireo nefa izao tontolo izao dia mifantoka amin'ny krizy lehibe? Tsy tokony hanao toy izany koa ve ny mpitantana ny zavamaniry, ny mpitantana ny varotra, ny mpitantana kaonty sy ny olon-drehetra?
© Mpampiasa Flickr khawkins04
Ireo mpivarotra dia tsy olona mihoatra ny olona noho ny olon-drehetra. Raha manapa-kevitra ny hanidy ny fandefasan-kafatra media sosialy isika, dia samy milaza izany tokony hifantoka amin'ilay zava-doza ny tsirairay na milaza an'izany izahay tsy ilaina amin'ny orinasantsika isika.
Raha ilay teo aloha, ny mangina amin'ny media sosialy dia midika fa mieritreritra olona vitsy kokoa isika amin'ny asa hafa izay mbola manao ny asany fa tsy mijery ny zava-mitranga.
Raha ity farany ity dia miteny izahay fa ny marketing dia tsy manandanja loatra toy ny fizarana hafa ao amin'ny orinasanay. Raha ny tena izy dia heveriko fa amin'ny maha-mpivarotra antsika dia manana fomba fijery voafetra momba ny sandantsika manokana isika. Niharihary izany rehefa nanandrana nifanakalo hevitra momba ilay olana tamin'ny Internet aho:
@tigersharkmusic Izany dia. Mandritra ny loza iray dia mila miaraka isika, ary ajanona amin'ny fampisehoana menaka bibilava. @robbyslaughter
- Profesora Tiki Ohana (@tikikitchen) Aprily 17, 2013
Ka ity ny lisitry ny fomba fanao tsara indrindra mandritra ny krizy media sosialy. Mety tsy hanaiky ianao. Izany no hevitra:
Voalohany, miresaka amin'ny fitantanananao mba hahalalanao fa manakatona na mampihena ny asa ny orinasa - Raha mikasa ny hikatona aloha izy ireo, mandefa mpiasa an-trano, na mampihena ny hetsika, tokony hahena arak'izany ny varotrao. Ary ho tompon'andraikitra amin'ny fampitana izany fanapahan-kevitra izany amin'ny vahoaka ianao.
Faharoa, avereno jerena ny paikadin'ny varotrao manontolo ho an'ireo singa mety tsy dia mahazaka. Ny fampirantiana fivarotana izay milaza fa ny vokatrao dia "DA BOMB" dia manafintohina tahaka ny bitsika manana atiny iray ihany. Tohizo ny fanaraha-maso ireo fisehoan-javatra rehefa miseho izy ireo mba hahafahanao manamboatra araka izay ilaina. Aza foanana fotsiny ny hafatra voalahatra rehetra, raha tsy hoe manakatona ny asa aman-draharaha rehetra koa ny orinasanao.
Fahatelo, avereno jerena ny fifandraisan'ny orinasanao sy ny indostriao amin'ilay voina ankehitriny. Raha manamboatra fitaovam-panatanjahan-tena ianao, ny fanapoahana baomba dia mety hanome aingam-panahy anao hanolo ny sasany amin'ireo hafatra fampiroboroboana anao amin'ny ezaka fampandrenesana momba ireo fiantrana tohananao mifamatotra amin'ny krizy. Na, mety te hitady fomba hanampiana mivantana ianao. (Ohatra: izay nataon'i Anheuser-Busch taorian'ny rivodoza Sandy.)
Fahefatra, mitandrema amin'ny fanehoana ny fihetseham-ponao. Fantatry ny rehetra fa mieritreritra ireo niharam-boina tamin'io loza io ny rehetra. Raha tsy misy zavatra azonao ampiana mihoatra ny hoe "Ny fonay dia mivoaka mankany…" dia mety tsy tokony hiteny na inona na inona ianao amin'ny maha marika azy. Azo antoka fa tsy lasa Epicurious na Kenneth Cole ianao. Ary mety tokony hanazava ny zavatra ataon'ny orinasanao valiny ianao raha misy fiantraikany amin'ny mpanjifanao sy ny mpisolovava anao izany fampahalalana izany.
Ohatra, raha manao fanomezana ara-bola ianao dia aza miresaka momba izany mandritra ny krizy. Fa raha hanome ra ny mpiasanao dia ampahafantaro ny olona fa hisy fahatarana ny famerenana miantso sy mailaka.
Ny valinteninao amin'ny haino aman-jery sosialy dia manimba ny asanao. Raha manao izay lazain'ny manam-pahaizana ianao ary manidy ny fandefasana hafatra mandeha ho azy, dia midika izany fa ny mpivarotra no hany olona saro-pady hampiato ny asany ary hifantoka amin'ny zava-dehibe, na milaza ianao fa tsy dia ilaina toy ny orinasa hafa ny marketing. fiasa. Ireo safidy roa ireo dia maneho taratra ratsy amin'ny asa.
Andao ataontsika olom-pirenena kilasy voalohany ny marketing. Andao hiara-hiasa amin'ireo matihanina hafa amin'ny taranja hafa mba hihetsika araka ny tokony ho izy, handrafitra amin'ny fomba hendry ary hitondra tena araka ny tokony ho izy.
Aza misalasala miombon-kevitra etsy ambany.
Tags: varotra krizyfilozofia marketingbarotra tetikaSocial Media Marketingloza amin'ny media sosialy
Apr 20, 2013 amin'ny 11: 45 AM
Salama Robby -
Tena ankasitrahako ny fitanisanareo ahy amin'ny sombintsombiny, ary heveriko fa mendrika ny fandinihanareo ireo olana saro-bidy tafiditra amin'ny fanovana hafatra ara-barotra amin'ny fotoana iray amin'ny voina nasionaly
Izany dia nilaza - tsy hanaiky anao aho.
Manoratra ianao hoe: "Raha manapa-kevitra ny hanakatona ny fandefasan-kafatra media sosialy izahay, dia milaza fa ny tsirairay dia tokony hifantoka amin'ilay voina na milaza izahay fa tsy zava-dehibe amin'ny orinasantsika."
Heveriko fa fanindrahindram-diso sandoka izany - tsy izy ireo ihany no hafatra roa nampitaina tamin'ny safidy hampiatoana ny fampielezan-kevitra mandeha ho azy mandritra ny fotoanan'ny loza.
Ho ahy manokana, dia fanekena fa eo amin'ny mpihaino ahy dia mety misy olona amin'ny dingana maro amin'ny alahelo. Ary ny hafa mety tsy malahelo mihitsy. Saingy noho ny fahasarotan'ny fihetsiky ny olona amin'ny voina sy ny fatiantoka, indrindra amin'ny ambaratonga lehibe, mino aho fa ny valiny etika ihany dia ny fiezahana tsy hanampy ny alahelon'olona amin'ny alàlan'ny hafatra marketing mandeha ho azy izay mety ho glib, mamaivay, na mandratra hafa. olona ao anaty alahelo - indrindra ny fahafantarana fa misy vintana tsara fa * be * amin'ny mpihaino ahy no malahelo.
Tsy dia hoe mino aho fa afaka mitarika ny mpihaino ahy amin'izay tokony hisy ny fifantohana. Manantena aho fa izy ireo dia olona manana fiainana feno sy manankarena izay ny olona no zava-dehibe kokoa noho ny tombom-barotra. Manantena aho fa tsy ny orinasako no zava-dehibe indrindra eo amin'ny tontolon'izy ireo, ary misafidy ny hampifanaraka ny hafatro amin'ny varotra araka ny voina.
Ho ahy sy ny namako, na dia manakatona ny hafatray mandeha ho azy aza izahay dia tsy nitsahatra nifampiresaka tamin'ny mpihaino anay. Fantatray fa mila miasa tanana manokana amin'ny fihainoana ny mpihaino anay izahay. Aleo manandrana mamadika haingana ireo hafatra mandeha ho azy. Mora kokoa ny miato ny filaharana mandeha ho azy ho an'ny «mpanombohana resaka» satria matetika ny atin'ny media sosialy dia mandefa fanavaozana tsotra avy amin'ny fo, ary mifantoka amin'ny fifamatorana kalitao. Ho anay, io no valinteninay voafantina tamin'ny zavatra nasain'ny mpihaino nilaina.
Ny fanavaozam-baovao voalohany taorinan'ny nitrangan'ny baomba dia sary tsotra an'ny mpihazakazaka iray miaraka amina caption maneho ny vavakay ho an'ny fiarahamonina any Boston sy ireo mpihazakazaka ny hazakazaka marathon. Miaraka amin'ny fahitana maherin'ny 80,000 (mihoatra ny 20K ao anatin'ny ora vitsy monja), miady hevitra aho fa hafatra ara-barotra izay nanakoako tamin'ny mpihaino antsika tamin'ny fomba mety kokoa noho ny famelana ireo hafatra mandeha ho azy hitohy.
Ho anay, ny sandan'ny maha-azo itokiana amin'ny maha marika azy dia tena zava-dehibe, tsy amin'ny fotoanan'ny loza ihany, fa hatrany. Amin'ny maha marika azy dia zava-dehibe ny mampifanaraka ny hetsika ataontsika amin'izay lazaintsika fa mampiasa ny famaritan'i Seth Godin ny maha-azo itokiana. Isika dia olona tena miahy ny mpanjifanay tokoa - tsy hoe loharanom-bola fotsiny, fa toy ny olona tena manana fihetseham-po marina, ary ny sasany amin'izy ireo dia tena sarotra amin'ny fotoan'ny loza sy alahelo. Ny maha-marim-pototra ho antsika dia ahitana ny fahazoana antoka fa ny hafatry ny varotra dia mamaly izany amin'ny fomba mora tohina mandritra ny fotoam-pahoriana sy alahelo ao amin'ny firenena.
Amin'ny lafiny sasany - mety hiteny akory ianao fa ny fampiatoana ny hafatra marketing mandeha ho azy amin'ny fotoana toy izany dia avy amin'ny fanajana ny hery goavan'ny asa marketing, fa ny fahefana kosa dia manana andraikitra hampiasana azy io amin'ny fahendrena.
Misaotra anao tamin'ny fanombohana fifanakalozan-kevitra - lohahevitra iray lehibe loatra tokony tsy hiraharaha, hoy aho.
Apr 20, 2013 ao amin'ny 1: PM PM
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra, Pauline
Ny tiako holazaina dia ny fampiatoana ireo hafatra mandeha ho azy mandritra ny krizy satria “misy zavatra manan-danja kokoa tokony hanahirana” dia toa tsy mifanaraka amin'ny tsy fampiatoantsika ny zavatra hafa rehetra ataon'ny orinasantsika. Fa maninona ny manohy ny tsena no tsy misy dikany kokoa noho ny manohy mivarotra, manohy manantena ny fahatongavan'ny olona amin'ny asany ara-potoana, na ny fisokafan'ny besinimaro?
Tsy manohitra mihitsy aho hoe marina ny marika. Heveriko fa misy tranga izay ilantsika hanodinana ny saintsika nasionaly amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasa mankany amin'ny voina. Izany no antony nanondroako ny fahaverezan'ny filoha Kennedy.
Ny ahiako dia ny tsy fitovizan'ny fitondran-tena amin'ny mpivarotra sy ny fifehezana fitsipi-pifehezana hafa amin'ny orinasa. Heveriko fa tsy fitoviana manimba ny asa satria mety hahatonga ny mpivarotra ho toa tsy ilaina izany na hahatonga azy ireo ho mora tohina loatra.
Te hanana fanajana bebe kokoa ny marketing. Ny fampihenana ny hetsika marketing ho an'ny daholobe amin'ny fotoana izay mbola anombohan'ny ankamaroan'ny fifehezana hafainganam-pandeha haingana tahaka ny hanamafisana ny varotra amin'ny maha olom-pirenena kilasy faharoa azy.
Mbola tsy hitovy hevitra ihany aho. Manoratra ianao hoe: "Te hanana fanajana bebe kokoa ny marketing. Ny fampihenana ny hetsika marketing ho an'ny daholobe amin'ny fotoana izay mbola anombohan'ny ankamaroan'ny fifehezana hafainganam-pandeha haingana tahaka ny hanamafisana ny varotra amin'ny maha olom-pirenena kilasy faharoa azy. "
Raha ny marina dia mino aho fa marina ny mifamadika. Ny fanaovana raharaham-barotra toy ny hetsika ara-barotra mahazatra amin'ny fotoana mahataona firenena dia hampihena ny fanajana ny mpivarotra - hanamafy ny fahitan'ny besinimaro ny marketing izany satria mifantoka amin'ny dolara mahery ka tsy miraharaha izay tena ilain'ny mpanjifa sy ny fihetseham-pony. . Ao amin'ny orinasako, ny valin'ny mpanjifako dia nanohana ny hevitro. Ary marina tokoa - amin'ny maha orinasa kely anay dia nampiato ny fandidiana hafa izahay. Ary satria mpitantana HR tamin'ny fiainana teo aloha, dia miahiahy aho fa be ny asan'ny orinasa hafa izay tsy nitranga tamin'ny Alatsinainy tolakandro. Tsy manana tarehimarika hanaporofoana an'io na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana aho, fa ny mpitondra hendry amin'ny raharaham-barotra dia mety naka ny zavatra nilain'ny mpiasany tamin'izany fotoana izany, ary mety tafiditra tao anatin'izany ny famelana ny sasany handeha hody aloha raha azo atao. Manan-danja ny iraka, fa raha tsy misy olona (mpanjifa na mpiasa) dia tsy hitranga ilay iraka.
Inona no tanjon'ny marketing? Manaporofo ny vidiny manokana na mamporisika ny mpanjifa handray fanapahan-kevitra tsara momba ny marika. Raha ilay teo aloha dia azonao antoka, Tweet eo. Raha ity farany dia mieritreritra mafy aho fa ny fiatoana kely mba hahavoan'ny tsena sy hamaly araka ny tokony ho izy dia mety hahomby kokoa. Azonao atao ny miady hevitra amin'ny zavatra rehetra tadiavinao ho an'ny sandan'ny marketing amin'ny maha-orinasa mitokana anao. Hifamaly toy ny fatra-pitia ihany koa aho fa ny marketing dia tsy mifarana fa fomba iray mankany amin'ny tanjona farany. Ary tsy hitako ho tsy fanajana ny asa na kely aza izany.
Ohatra, ao anaty fiarako, ny lasantsy dia fomba iray hahazoana tanjona. Tena hajaiko izany, fa izy irery, raha tsy misy ny mekanin'ny fiara dia tsy manao na inona na inona izy. Ary raha tsy misy izany dia tsy handeha ny fiarako. Ny fifantohana manokana amin'ny kalitaon'ny lasantsy tsy misy fiheverana ireo rafitra hafa ao anaty fiarako dia tsy hampandeha tsara ny fiarako.
Apr 20, 2013 ao amin'ny 2: PM PM
Amiko, ilay marika izay mijanona amin'ny fiantsoana ny vokatra vokariny saingy manamboatra azy ireo hatrany, ny rojon'ny fivarotana kafe izay mijanona tsy mandefa tweet fa mivarotra kafe foana - ireo no marika tsy hajako. Toy ny hoe miala amin'ny varotra matetika izy ireo, saingy mahatsapa fa mila mampihena ny feony mandritra ny loza iray.
Heveriko fa tsy mitokana ny marketing. Heveriko fa (tokony) hifandray akaiky amin'ny kolontsain'ny orinasa iray sy ny fifandraisany amin'ireo mpanjifany sy ireo mpiaro azy io.
Izay no antony ahitako ny marika mandray fanapahan-kevitra holistic fa tsy natokana ho an'ny departemanta marketing fotsiny. Heveriko fa hampitombo ny fanajana ny marketing ny fanaovana izany, satria ny orinasa dia hitovy amin'ny pejy iray ihany fa tsy hijerena fotsiny ny fametahana azy mba hanamafisana ny hevitry ny besinimaro.
Mety ho tokana amin'ny fahitanao azy ianao Robby! Resaka mahafinaritra!
Apr 20, 2013 ao amin'ny 12: PM PM
Mila miombon-kevitra amin'i Pauline aho. Na dia mieritreritra aza aho fa zava-dehibe ny fahatsiarovan-tena amin'ny zavatra ataon'ireo marika ataonay amin'ny auto-pilot (vakio = voalahatra), amin'ny fotoana iray ihany dia tsy maintsy tadidintsika ny hitazomana ny toe-javatra.
Tsy ny orinasa rehetra no ho voan'izany amin'ny trangam-pirenena. Ny valiny ampahibemaso dia tsy takiana amin'ny marika rehetra, fa miankina amin'ny orinasa / tsena tsirairay. Raha mpanamboatra akanjo ho an'ny zaza ianao na orinasa afomanga, dia mety hanana valiny hafa amin'ny tambajotra sosialy momba ny zava-nitranga tany Boston raha oharina amin'ny orinasa mpampiantrano na toerana fanamboarana fiara. Toy izany koa, ny toerana fanamboarana fiara dia mety te-hijery ny hafatry ny besinimaro raha sendra voina nahazo baomba fiara.
Raha ny fihenan'ny marketing media sosialy manerana ny firenena ho an'ny marika dia mieritreritra foana aho fa fanapahan-kevitra malina izany. Mazava ho azy, tsy maintsy lanjalanjaina amin'ny haben'ny marketing amin'ny marika nomena izany. Ny orinasako, ohatra, dia manao marketing amin'ny haino aman-jery sosialy amin'izao fotoana izao, ka ny fampiatoana ny fanetsehana dizitaly antsika mandra-pahatapitry ny trangan-javatra lehibe misy ny voina dia hahafaty izay fanatrarana ny besinimaro ataontsika, satria 100% ny hafatray novokarina tamin'ny Internet.
Ny halavany sy ny fohy dia izy dia tsara ny mandeha an-tongotra. Raha ny zava-misy dia ho fantatry ny tompona orinasa marani-tsaina ny hetsika malina tokony horaisina manoloana ny hafatr'izy ireo amin'ny vahoaka amin'ny fotoanan'ny krizy. Ary amin'ny farany, ny besinimaro no manapa-kevitra raha mifanaraka tsara na tsia ny fihetsika noraisin'ity marika ity.
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra, John.
Tsara ny mandeha an-tongotra. Izaho dia miahiahy bebe kokoa momba ny fanajana ny sehatry ny varotra noho izaho miresaka momba izay tsara indrindra amin'ny orinasa iray. Heveriko fa ny orinasa iray dia tokony handrindra ny ezaka ataony. Raha mangina amin'ny Internet izy ireo, dia mety tokony hijery ny hanidiana ny varavarany any amin'ny departemanta hafa koa.
Marina ny anao fa hanapa-kevitra ny besinimaro raha mifanaraka tsara na tsia ny hetsika nataon'ny marika. Saingy efa fantatsika izany ny vahoaka tsy matoky ny marika be atomboka.
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanehoana ny fahatokiana dia ny tsy fivadihana. Orinasa mihidy mandritra ny ora vitsivitsy hanome rà sy manavao ny fandefasan-kafatra ataon'izy ireo an-tserasera mba hampiseho tsy fitoviana. Orinasa manakana ny marketing rehetra nefa misokatra ihany raha tsy izany dia mampiseho fa tsy tena ivon'ny kolontsain'izy ireo rahateo ny fandefasan-kafatra.
Misaotra ny valiny Robby.
Manaiky aho fa ny orinasa dia tokony handrindrana ny ezak'izy ireo, na izany aza, satria ny orinasa iray mampiato ny fampiroboroboana ny vokatra mandritra ny fotoana voafetra dia tsy voatery hanalefaka ny orinasa ny andraikiny amin'ny sehatra hafa. Raha hampiato ny marketing aho noho ny voina nateraky ny firenena, tsy midika izany fa mbola tsy manana mpanjifa efa faly aho. Mila manompo ireo mpanjifa noraisiko ho tompon'andraikitra amin'ny fifaliana foana aho.
Izany angamba no antony tsy itokisan'ny mpanjifa ny marika hatombohany. Heveriko ihany koa fa misy ifandraisany betsaka amin'ny zava-misy fa ny ankamaroan'ny fanentanana amin'ny marketing dia tsy mifantoka amin'ny filan'ny mpanjifa. Ny fomba fahitako azy dia momba ny fitadiavana tadin-tsaina mba hahatonga ny mpanjifa hizara amin'ny volany. Hafa ny nametrahako ny orinasako. Mba hahazoana matoky ny mpanjifa, mila mahafantatra azy ireo amin'ny sehatra manokana ianao. Ny ohabolana reny sy pop-ohabolana dia ohatra voalohany amin'izany. Hain'izy ireo ny mitondra ny mpanjifa toy ny zanak'olombelona, ​​mifanohitra amin'ny fahitana azy ireo ho toy ny takelaka dolara izay namakivaky ny varavarana fotsiny - ary izany no nahatonga ny mpanjifa tsy nahomby rehefa nanomboka niantsena tao amin'ny magazay lehibe mifanohitra amin'ny orinasa kely eny an-dalambe izy ireo. . Inona no mitranga? Ny 'bandy kely' dia miala amin'ny asany ary ny sisa tavela dia ny fivarotana boaty lehibe ary fantatsika rehetra ny vokany: tsy dia mifaninana firy amin'ireo rojo lehibe ary manomboka mampiakatra ny vidiny mifanitsy amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifany izy ireo. Manjary mivarotra sy mahazo vola fa tsy manompo ny mpanjifa akory.
Noho izany, nanitsakitsaka aho. Ny tiana hambara dia ny momba ny tsy fitoviana ary tsy tsapako tsotra izao fa satria misy faritra iray amin'ilay orinasa mety hisy fiantraikany amin'izany, dia midika izany fa mila atsahatra tanteraka ny asan'ny orinasa hafa. Mivarotra ny marketing, fa rehefa misy adidy tokony hataonao dia zava-dehibe ny mahatakatra fa tsy maintsy fenoina ireo adidy ireo.
Nanaiky, John. Na dia tompona orinasa kely sy mpitantana HR teo aloha aza aho, tsy maninona raha manombatombana ny filan'ny mpiasako sy / na ny mpifanaraka amin'ny fotoana fohy ary mamela ny hafa hiala sasatra na hody noho ny fisehoan-javatra tsy mahazatra raha toa ka ilaina izany. ho. Azo antoka fa manana adidy amin'ny mpanjifanay izahay. Saingy - ny olona mamela ahy hihaona amin'ny iraka ataoko dia manan-danja amiko tokoa tahaka ny mpanjifako.
Profesora Tiki Ohana
Apr 22, 2013 amin'ny 9: 46 AM
Manaiky an'io hevitra io aho.
“Heveriko ihany koa fa misy ifandraisany betsaka amin'ny hoe ny ankamaroan'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing dia tsy mifantoka amin'ny filan'ny mpanjifa”
Izany no antony ampitoviko amin'ny marketing amin'ny menaka bibilava be dia be ny marketing, na farafaharatsiny miverina amin'ny andron'ny PT Barnum. Ny marketing dia tsy mifantoka amin'ny filan'ny mpanjifa. Fa kosa miteny amin'ny mpanjifa hoe "Mila an'io ianao." Tsy faly? "Mila Brand-X ianao!" Modely efa antitra be io. Miova ny teny, miova ny fomba fampisehoana, fa amin'ny farany dia mitovy ihany ny hafatra. “Mila an'ity ianao.” Raha ny marina dia tsy ilaiko izany.
Ny marika hatokisako, dia ny marika izay mampiseho fandraisana andraikitra amin'ny andraikitra ara-tsosialy noho ny fombany manokana - ary vitsy izy ireo. Tsy milaza aho hoe tokony hakaton'ny marika ny fandefasan-kafatra. Alefaso fotsiny ireo entana mandeha ho azy, ary avelao ny fifehezan'olombelona bebe kokoa. Na izany aza, araka ny efa noresahinao taloha, dia mora kokoa izany ..
Robby, mitondra teboka tsara be dia be ianao. Heveriko fa tsy tokony hijanona ny fandraharahana, fa ny marketing kosa mila mahafantatra fa misy fotoana sy toerana, ary mety ho mafy kokoa ny hafatrao amin'ny fomba fandraisanao ny voina fa tsy ny fihazonana ny matetika. Ny marketing ho an'ny marketing dia toa tsy mahita, ary mifanohitra amin'ny andraikitra sivika. Mba hahatonga ny marketing ho olom-pirenena kilasy voalohany dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny hevitra momba ny adidy sivika sy ny andraikitra. Midika izany fa ny fametrahana ny vondrom-piarahamonina ho iray manontolo aloha, ary mamela ny olona hitady anao am-pitiavana rehefa ilainy izany. Aza adino ny zavatra niainan'ny olombelona izay mitranga, ary makà toerana miverina amin'ny raharaha lehibe kokoa.
Na izany aza, toa an'i John sy Pauline, heveriko fa ny iray amin'ireo fahasamihafana lehibe eo amin'ny marketing (indrindra ny marketing amin'ny haino aman-jery sosialy) dia ny fivarotana mijanona misokatra manome fahafaham-po ny filàna, na dia toerana hiangonana fotsiny aza.
Heveriko fa ny olako dia, indrindra amin'ny bitsika mandeha ho azy, mila mandinika izay ilain'ny mpanjifa isika. Satria raha tsy ataontsika izany dia tsy misy dikany amin'ny menaka bibilava amin'izay fotoana izay.